ရုရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Golden Visa မှနေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုရှားတွင်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး ရုရှား၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ Residency by Russia တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများရုရှားရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ရုရှား၌နေထိုင်ခြင်း၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ရုရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှ Residency၊ ရုရှား၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒုတိယအနေဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှစ်ဆ၊ , ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ရုရှား၌နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ရုရှားရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ရုရှားနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရုရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရုရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရုရှားနိုင်ငံတွင်သံတမန်ဆိုင်ရာဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားသောဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရုရှားနိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရုရှားရှိရွှေဗီဇာ၊ ရုရှားရှိရွှေဗီဇာ၊ ရုရှားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ရုရှားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ရုရှားရှိဒုတိယဗီဇာရုရှား၊ ရုရှားရှိဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်၊ ရုရှားရှိရွှေဗီဇာ၊ နိုင်ငံသားနှင့်ရုရှားရှိရွှေဗီဇာနေထိုင်ခွင့် ရုရှားရှိရွှေဗီဇာ၊ ရုရှား၌ရွှေဗီဇာရုရှား၊ ရုရှားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ရုရှားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ရုရှား၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရုရှားတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 100,000
၆,၆၆၃,၇၃၆ စတုရန်းမိုင်ကျော်ကျော်ရှိသောရုရှားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ ၁၄၃ သန်းရှိပြီးမြို့ပြ၏နေအိမ် (မော်စကို) သည်အလွန်အမင်းကြွယ်ဝချမ်းသာသူများဖြစ်သည်။
ရုရှားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သတ္တမမြောက်အကြီးမားဆုံးအိမ်တွင်းဈေးကွက်ဖြစ်ပြီးဥရောပတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည် PPP အခြေပြုဂျီဒီပီတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဆဌမအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ တွင်ကမ္ဘာ့ဘဏ်အရထိပ်ဆုံး ၁၀ နေရာတွင်ရှိသည်။ ရုရှားသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်ရေးအဟန့်အတားများကိုလျော့ကျစေပြီးကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာသည်။ တင်ပို့သူများအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်တံခါးဖွင့်သည် 10 ကမ္ဘာ့ဖလားဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ ၉ ဘီလီယံကျော်သောအရင်းအမြစ်များကိုလေဆိပ်ဆိပ်ကမ်းများ၊ တည်းခိုခန်းများနှင့်လမ်းများ၊ ဆေးခန်းများ၊ အပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများ၊ လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့်အိမ်ယာသုံးမြို့ရှိအခြားဒေသများသို့တိုးတက်အောင်လုပ်လိမ့်မည်။
များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရုရှားကုမ္ပဏီများသည်အိမ်နီးချင်းအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောကုမ္ပဏီများနှင့်မပေါင်းသင်းပါ။ ရုရှားသည်စွမ်းအင်၊ ပစ္စည်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအမျိုးအစားများနှင့်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောပံ့ပိုးမှုများလိုအပ်သောလေကြောင်းလုပ်ငန်းကိုအရင်းအမြစ်များကိုထည့်သွင်းနေသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ရုရှားနိုင်ငံရှိလေယာဉ်ပျံ၊ ဒုံးပျံနှင့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများတင်သွင်းမှုတွင် ၈၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ သစ်သား၊ စက္ကူများမှ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းတင်သွင်းသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ၏သွင်းကုန်၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်စက်ပစ္စည်းများနှင့် hardware များကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။
ယူအက်စ်မှရုရှားသို့တင်သွင်းမှု၏ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်နှစ်စဉ်တည်ငြိမ်သောတိုးတက်မှုနှင့်အတူ။ ၂၀၁၅ တွင်ရုရှား၏သွင်းကုန်ဆည်များ၌အမေရိကန်၏တိုးပွားမှု ၁၃၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်။ ရုရှားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အနောက်နိုင်ငံများမှဥရောပမှအရှေ့ဘက်မြောက်အမေရိကအထိ၊ တောင်အာရှဒေသနှင့်အာရှနိုင်ငံများကြားတွင်ဇုန်တစ်ခုဖုံးအုပ်ထားပြီး ၁၁ ဆဒေသများကိုဖြတ်သန်းသွားသောကြီးမားသည့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကိုဖော်ညွှန်းသည်။
ရှည်လျားပြီးသိသာသောသမိုင်းအပြီး၌ကွဲပြားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီးရုရှား၏လူ ဦး ရေသန်း ၁၄၀ ကျော်ရှိသောစျေးကွက်ရှိသောဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ခိုင်ခံ့သော ၀ ယ်သူစီးပွားရေးသည်အကျိုးတူလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုသို့တိုးတက်နေသည်။ စီးပွားရေးဖွင့်ပွဲကိုရုရှားစီးပွားရေးနယ်ပယ်များစွာတွင်တွေ့နိုင်ပြီးပြည်သူ့အာဏာပိုင်နှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးကောင်စီ (FIAC) မှဘဏ္specialistsာရေးကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ခိုင်မာသောအကူအညီများရှိသည်။ Invest in Russia မှပြောကြားချက်အရရုရှားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တိုးတက်မှုအရှိဆုံးနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဂျီဒီပီဖွံ့ဖြိုးမှုသည်အလယ်အလတ်တန်ဖိုး ၆.၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ၈.၁% သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ (ပုံမှန်ကမ္ဘာ့ဘဏ္financialာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၄-၅% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) အားဖြည့်ပေးသောရူဘယ်ကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာအားဖြင့် ၁၉၉၉-၂၀၀၇ ဂျီဒီပီတိုးတက်မှုသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ၂၆% ရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းထက်များစွာပိုများသည်။ ရုရှားလူမျိုးများသည်များသောအားဖြင့်မျှတမှု၊ စာပေးစာယူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်သောရာထူးတိုးမြှင့်သောစိတ်ဓာတ်များကို ၀ ယ်ကြသည်။ “ ညှိနှိုင်းခြင်း” ကိုအလားတူမျှဝေထားသောအားသာချက်အတွက်ပွင့်လင်းသောတံခါးအဖြစ်ပုံမှန်ရှုမြင်ကြသည်။ တစ် ဦး ချင်းဆက်သွယ်မှုသည်ရုရှားတွင်လည်းအလားတူအရေးပါသည်။ ရုရှားတွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်နေသော်ငြားခိုင်မာသောငွေချေးစာချုပ်များပြုလုပ်ရန်အချိန်ကို ဦး စားပေးသင့်သည်၊ ရုရှား၏ဓားစာခံဈေးကွက်တွင်လူ ဦး ရေသန်း ၁၄၀ ကျော်၏ ၀ င်ငွေများသည်တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ရုရှား၏ခိုင်မာသောသင်ကြားပို့ချမှုမူဘောင်သည်ထူးချွန်ထက်မြက်သောလုပ်သားအင်အားဖြည့်တင်းခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူသူများကိုသိခြင်းကြောင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ရုရှားပြည်သူလူထု၏စွမ်းရည်သည်ရုရှားလက်ရာ၊ ဂီတ၊ အရေးအသားနှင့်ဗိသုကာပညာတို့၏အောင်မြင်မှုများတွင်ထင်ရှားသည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၏ကြီးမားသောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာတည်ရှိမှုသည်အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတည်းနှင့်မတူညီသောအကွာအဝေးကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဥရောပနှင့်အာရှကို ဆက်သွယ်၍ မြောက်အမေရိကပြည်မကြီးကိုတန်းစီထားသည်။ ရုရှားသည်သမုဒ္ဒရာ၊ လမ်းနှင့်ရထားလမ်းများသို့ခမ်းနားစွာ ၀ င်ရောက်နိုင်စွမ်းရှိပြီးလေကြောင်းဆိပ်ကမ်းငယ်အချို့တည်ရှိသည်။ ရုရှား၏areaရိယာသည်ဓာတ်သတ္တုသိုလှောင်ရုံများ၊ ကျောက်မီးသွေးတွင်းများ၊ မီးလောင်လွယ်သောသဘာဝဓာတ်ငွေ့များနှင့်ကျွန်းသစ်များ၏များပြားလှသောဘုံပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့်ထပ်မံတိုးမြှင့်ထားသည်။ ရုရှားသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်စုစည်းထားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၏ပြင်းထန်သောဆောင်းရာသီနှင့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အခြေအနေများကခံနိုင်ရည်ရှိရန်တိုက်ပွဲများအစားအတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြနေသည်။ အထူးသဖြင့်ရုရှားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်စကားပြောသောအခါရုရှား၌အတူတကွလုပ်ဆောင်နေစဉ်ဤလှုပ်ရှားမှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုခံစားမှုကိုရှုမြင်သင့်သည်။ ဥပမာ၊ လူကိုမဟုတ်ဘဲစုရုံးမှုကိုဖြေရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအသင်းအဖွဲ့များသည်ရုရှား၌အတူတကွလုပ်ကိုင်ခြင်း၏အထက်ပါအားသာချက်များမှကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သည်။ ဤအားသာချက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရုရှားယဉ်ကျေးမှု၏ပထ ၀ ီအနေအထား၊ နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အလားအလာရှိသောစနစ်များပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ချက်နှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ ၎င်းသည်အဆင့်အားလုံးတွင်ရုရှားစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုကိုကျယ်ပြန့်စွာနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်။
ရုရှားရှိလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုအသုံးချခြင်းသို့မဟုတ်ရုရှားနိုင်ငံနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းစသည့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအသင်းအဖွဲ့များသည်စီးပွားရေးနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သင့်သည်။ အရည်အသွေးတွေနဲ့စာပေးစာယူစတိုင်များ။
ရုရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ရုရှားနိုင်ငံ
စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဗီဇာ (၁.၂, ၅ နှစ်သက်တမ်းရှိသည်)
ရုရှား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အချိန် processing
(၃) နှစ်မှ (၅) နှစ်တိုင်နေထိုင်ပြီးသည့်နောက် (ရုရှားဘာသာလိုသည်)
ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ရုရှားအတွက် ရုရှားမှဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုရုရှားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ ရုရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ရုရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ရုရှားမှ Golden Visa သို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ဘဲရုရှားမှဖြစ်စေ၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်ဖြစ်စေနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ရုရှားမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ရုရှားသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ရုရှားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ရုရှားနိုင်ငံအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ရုရှားအတွက်, ရုရှားအတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, ရုရှားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, ရုရှားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်ရုရှားအဘို့အတတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ
ရုရှားနိုင်ငံမှ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
ရုရှားရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုရုရှားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း။
ရုရှားနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ရုရှားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ရုရှားရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုရုရှားနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း။
ရုရှားနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ရုရှားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ရုရှားတွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်ဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။ ရုရှားရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့တွင်အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီးကောင်းမွန်သောအမြတ်အစွန်းများရရှိပြီးသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ရုရှားရှိကောင်းသောနေရာများတွင်ရှိနေပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ရုရှား Residency
ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏ Residency သည်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်ရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ရုရှားမှသို့မဟုတ်ရုရှားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ရုရှား၏ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဖောက်သည်များအားရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်ကန ဦး Due Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency ဖြင့်ရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်စ်တယ်လီးစ်ကိုရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာတင်ခြင်း။ Residency ဆိုင်ရာကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ရုရှားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားရုရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှ Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရုရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ရုရှားနိုင်ငံမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ရုရှားတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ရုရှားသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံခြင်းအားဖြင့် ရုရှား၌မည်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းကြသည်မဟုတ်။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ရုရှားအတွက် ရုရှားရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရုရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ရုရှားရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ရုရှား၌သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ရုရှားကိုအထောက်အပံ့မရပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရုရှားအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ရုရှားအတွက် ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်ရုရှားရှိသူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ရုရှားနိုင်ငံ ရုရှားနိုင်ငံရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရှေ့ရပျ ရုရှားနိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ရုရှားနှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ရုရှားအာဏာပိုင်များမှငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ရုရှား၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ရုရှားဥပဒေ၏လိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ရုရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ရုရှားအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုရုရှားသို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်ရုရှားနိုင်ငံအတွက် dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရယူခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောရုရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
ရုရှားနိုင်ငံအတွက်သင်၏ Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ရုရှားအားစီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့များအတွက်ရောက်ရှိနေလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးရုရှားအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်။
အကယ်၍ ရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုရုရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တွက်လျှင်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်စသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ရုရှားအတွက် ၀ ယ်ယူသူအမြောက်အမြားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ရုရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်အခြားကုန်ကျငွေများပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ရုရှားအတွက်
ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ရုရှား၌ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ရုရှားနှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အနေဖြင့်၊ ရုရှား၌တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ရုရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့် Residency အပြင်ရုရှားတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ရုရှားအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့အားရုရှားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည်။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရုရှားနိုင်ငံ၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရုရှားနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ရုရှား၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ရုရှား၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ရုရှားသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ရုရှားနိုင်ငံရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ရုရှားရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ရုရှား၌အတိုင်ပင်ခံလိုအပ်ပါတယ် ရုရှား၌ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ရုရှားတွင်ရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် ရုရှားကလုပ်မယ် ရုရှားရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ရုရှား၌ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ရုရှားရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ရုရှားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ရုရှား၌နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ရုရှားအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ရုရှားနိုင်ငံအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ရုရှားအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ရုရှားရှိ Virtual Office လိပ်စာ
ရုရှား၌ Setup ကိုစီးပွားရေး
Residency ပြီးနောက်ရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရုရှားနိုင်ငံ.
အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုရုရှား၌ကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည်
ရုရှား၌ web ဒီဇိုင်း
ရုရှား၌ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ရုရှား၌ Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ရုရှားရှိ App Development
ရုရှား၌ software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားတရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရုရှားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ရုရှားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ရုရှားတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ရုရှားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ရုရှားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသက်တမ်းရှိသည်။
ရုရှားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရုရှားသို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်ရုရှားသို့လာရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ရုရှားသို့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားရှေ့နေအားတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသင့်သည်။ ရုရှားပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်ပယ်နယ်လ်သို့မဟုတ်ရုရှားကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ရုရှား၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှနေထိုင်ခွင့်
ရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကိုအိမ်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ရုရှား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ရုရှား၏နေထိုင်ခွင့်ကိုရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ ရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ရုရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ရုရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်မှတစ်ဆင့်ရုရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၊ ရုရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှထောက်ပံ့ခြင်း ရုရှားမှာ။
ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ရုရှားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း ရုရှား၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ရုရှားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနေထိုင်ခြင်း ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
ရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရုရှားတွင်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ရုရှား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကိုရုရှားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ရုရှား၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ အကောင်းဆုံးမှာရုရှားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ရုရှားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ၏အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရုရှားအတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ရုရှားရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ရုရှားရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ရုရှားရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ရုရှားအတွက်စျေးသက်သာသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ရုရှားအတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ရုရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုရုရှားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းစသည်တို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ရုရှား၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ရုရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ ရုရှားနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ရုရှားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ရုရှားနိုင်ငံတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ရုရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ရုရှားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ရုရှားနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ရုရှားရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ရုရှား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ရုရှား၏နေထိုင်ခွင့်ကိုရယူခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရုရှားသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ရုရှားနိုင်ငံမှထောက်ပံ့သောရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။ ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ရုရှားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ရုရှားအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ရုရှားနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ရုရှားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ရုရှားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ရုရှားရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ရုရှားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ရုရှားနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
Residency အတွက်အနိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ရုရှား၌ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရုရှားကိုတရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ ရုရှားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ရုရှားမှကိုယ်စားလှယ်များသည် Residency ကိုရုရှားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
Residency သည်ရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency သည်ရုရှားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များအတွက်မြင့်မားသောအသားတင်တန်ဖိုးရှိသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ Residency မှ Residency အတွက် Residency ကိုသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနိုင်ငံသားများအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှရုရှားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အိန္ဒိယမှရုရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency ယူအေအီးမှရုရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ရုရှားအတွက်
မြေအောက်အသုံးချမှုအတွက်ပြည်ထောင်စုအေဂျင်စီ - http://www.rosnedra.com
အသေးစားဆန်းသစ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကူညီပံ့ပိုးမှုဖောင်ဒေးရှင်း (FASIE) - http://www.fasie.ru/
အင်ဒို - ရုရှားသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာစင်တာ (IRSTC), မော်စကိုဘဏ်ခွဲ http://www.ristc.com
ရုရှားသိပ္ပံအကယ်ဒမီ (RAS) - http://www.ras.ru
ရုရှားနာနိုနည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်း (RUSNANO) - http://en.rusnano.com
ရုရှားအင်ဂျင်နီယာအကယ်ဒမီ - http://www.info-rae.ru/
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ Surveillances အပေါ်ဖက်ဒရယ်ဝန်ဆောင်မှု http://www.roszdravnadzor.ru/en
ဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးအေဂျင်စီ (ROSSVYAZ) - http://eng.rossvyaz.ru
သိပ္ပံနည်းကျအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီ (FASO Russia) - http://fano.gov.ru/en/
ရုရှားအခြေခံသုတေသန (RFBR) - http://www.rfbr.ru/rffi/eng/about
ဖောက်သည်များအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လူသားတို့၏သုခချမ်းသာစောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုင်ရာဖယ်ဒရယ်ဝန်ဆောင်မှု (ROSPOTREBNADZOR) - http://rospotrebnadzor.ru/en/web/en
ဖက်ဒရယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဇီဝအေဂျင်စီ - http://fmbaros.ru/
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန http://www.rosminzdrav.ru
ဂေဟစနစ်၊ နည်းပညာနှင့်နျူကလီးယားကြီးကြပ်မှုဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်ဝန်ဆောင်မှု (GOSNADZOR) - http://en.gosnadzor.ru/
Ural ဘဏ်ခွဲ http://www.uran.ru
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏သဘာ ၀ သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာန http://www.mnr.gov.ru/english/
ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (Roskomnadzor) - http://www.rsoc.ru
ပညာရေးနှင့်သိပ္ပံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (ROSOBRNADZOR) - http://www.obrnadzor.gov.ru
ဖက်ဒရယ်အာကာသအေဂျင်စီ (ROSCOSMOS) - http://en.roscosmos.ru/
ဖက်ဒရယ်နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့် metrology အေဂျင်စီ (Rosstandart) - http://www.gost.ru/wps/portal/pages.en.Main
RAS ၏အရှေ့ပိုင်းဌာနခွဲ http://old.febras.ru/index_.html
ရုရှားသိပ္ပံရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (RSF) - http://xn--m1afn.xn--p1ai/en
Hydrometeorology နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ Federal Service (ROSHYDOMET) - http://www.meteorf.ru/
RAS ၏ဆိုက်ဘေးရီးယားဘဏ်ခွဲ http://www.sbras.ru/en
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် Mass ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန http://minsvyaz.ru/en/
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ပညာရေးနှင့်သိပ္ပံ ၀ န်ကြီးဌာန (RMES) - http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီ - http://voda.mnr.gov.ru
link ကိုမှ ရုရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ရုရှား၌လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်